Hacker British ah oo weerar Internet ku gooyay dhammaan Internet-ka dalka Liberia… – Hagaag.com
Posted on 12 Janaayo 2019 by Admin in Technology // 0 Comments
Maxkamad British ah ayaa seddax sano xabsi ah ku xukuntay Hacker ama mid ka mid burcada u dhacda computer-ada oo lagu magacaabo Daniel Kay oo u dhashay British oo fuliyey howlgal elektronic oo lagu jabsanayey Internet-ka oo keentay in uu go’o Internet-ka dalka Liberia oo idil.
Daniel Kay oo 30 jir ah ayaa ku qaaday weerar elektronic ah shirkada isgaarsiinta dalka Liberia “Lonestar” bishii October sanadkii 2015, waxay gaartay awooda weerarkiisa in uu go’ay internet-ka dalkaasi oo dhan oo ku yaalla Galbeedka Africa.
Hay’adda British-ka ee la dagaalanka dambiyada, ayaa sheegtay in mid ka mid ah saraakiisha sare ee shirkada “Cellcom” oo tartan ka dhaxeeya “Lonestar” ay kiraysatay Hacker-ka British-ka si uu u weeraro Internetka, laakiin ma jirto wax caddayn ah in shirkadaasi “Cellcom” ay wax ka ogeyd dhacdadan.
Daniel Kay ayaa wuxuu qirtay dembiga oo wuxuu qiray abuuritaanka shabakadda botnet, oo ah qalab badan oo ka mid ah qalabka lagu jabsado internetka “DDoS.” Kay ayaa wuxuu adeegsaday shabakada botnet markii uu ku noolaa Qubrus si uu u fuliyo weerarka lagu waxyeeleynayo adeega shirkada Lonestar.
Madaxa Qaybta La-dagaallanka burcada dambiyada internetka ee Britain Mike Howlett ayaa sheegay in Kay u shaqaynayey sidii “Hackers la kireysto”, howlihiisa waxay wax yeeleen ganacsiyo badan oo dalal badan oo caalamka ah, dhibanayaasha ayaa khasaaray malaayiin dollar.